नखिपोटमा आनन्दवन अस्पतालको क्लिनिक - Health Today Nepal
नखिपोटमा आनन्दवन अस्पतालको क्लिनिक
September 14th, 2016 समाचार0comments
बिगत ६० वर्षदेखि कुष्ठरोगीलाई उपचार र प्रभावितलाई पुनस्र्थापना गराउदै आइरहेको ल्याप्रोसी मिसन अन्तर्गत लेलेमा सञ्चालित आनन्द वन ल्याप्रोसी हस्पिटलले ललितपुरको नखिपोटमा आफ्नै भवनमा क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । विगत लामो समयदेखि सातदोवाटोमा भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको पाटन क्लिनिक गत वर्षको भूकम्पले चर्किएपछि नखिपोट स्थित आफ्नै भवन खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हो ।
नव निर्मित क्लिनिकको एक समारोहबिच बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उद्घाटन गरेका हुन् । क्लिनिकमा कुष्ठरोगको उपचारका साथै हाडजोर्नी तथा नसा रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, फिजियो थेरापी, एक्सरे, इसिजीलगायतका सेवा उपलब्ध छन् । कार्यक्रममा ल्याप्रोसी मिसन नेपालका कन्ट्रि डाइरेक्टर शोभाकर कडेलले मिसनले कुष्ठरोगीहरुका लागि सञ्चालन गरिरहेको एकसय दश सैयाको आनन्द वन अस्पतालले ५० हजार विरामीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको बताए । नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण गर्न मात्र नभएर उन्मुलन गर्न समेत ल्याप्रोसी मिसनले नेपाल सरकारसंग हातेमालो गरिरहेको बताए । मिसनले कुष्ठरोगीको उपचारमा मात्र नभएर उनीहरुलाई समाजमा पुर्नस्थापना पनि गर्ने गरेको स्मरण गर्दै अहिलेसम्म करिव एक हजार कुष्ठरोगीको पुर्नस्थापना गरि सकिएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सरकारले मात्र नेपालबाट कुष्ठरोग उन्मुलन गर्न नसक्ने स्विकार्दै कुष्ठरोग मुक्त नेपाल बनाउन ल्याप्रोसी मिसन नेपालको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । कुष्ठरोगीको उपचार र पुर्नस्थापनामा ल्याप्रोसी मिसनले गरेको सहयोगका लागि मन्त्री थापाले आभार व्यक्त गरे । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेर स्वास्थ्यमान ठूलो बजेट विनियोजन भइरहेको भए पनि त्यस अनुसारको स्वास्थ्य सेवा भने जनताले पाउन नसकेको तथ्य उजागर गर्दै मन्त्री थापाले त्यसका लागि राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको प्रतिवद्घता आवश्यक रहेको औल्याए । उनले भने, ‘ कुष्ठरोग अतिप्रभावित तराईका १५ जिल्लाका सभासद्हरुले मेरो निर्वाचनमा कुष्ठरोग उन्मुलन गर्छु भनेर लाग्नु पर्यो । अब बाटो, पुल र स्कुल बनाउनुलाई मात्र विकास भन्नु भएन । स्वास्थ्य पनि विकास हो । ’
कुष्ठरोग नियन्त्रण महासाखाका प्रमुख डा. बाशुदेब पाण्डेले नेपालबाट विसं २०६५ सालमै कुष्ठरोग निवारण भइसकेको भएपनि उन्मुलन हुन नसकेकोले चुनौति बाकी नै रहेको बताए । उनले तराईका १५ जिल्लामा कुष्ठरोगीको संख्या बढी देखिएकाले त्यहाँ विषेध अभियान चलाउन लागिएको जानकारी दिए । ल्याप्रोसी मिसनका अध्यक्ष अशोक अधिकारीले आनन्द बन अस्पतालले नखिपोटमा आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री थापाबाट जनताले धेरै आशा गरेको स्मरण गराए । कार्यक्रममा आनन्द बन अस्ततालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. इन्द्र नापितले आनन्द बन अस्पतालका शल्यचिकित्सकहरुले आफूले सिकेको सिप विदेश गएर तालिम दिने गरेको जानकारी गराउदै यो नेपालकै लागि प्रतिष्ठाको बिषयमा भएको बताए । आनन्द बन अस्पतालका तालिम प्रमुख गोपाल सिवाकोटीले अहिलेसम्म १० हजार स्वास्थ्यकर्मिलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए ।
Previous article आत्महत्या रोकथाम दिवसमा राजधानीमा प्रभात फेरि
Next article गगनले भने, स्वास्थ्यमा गरेको लगानी खर्च होइन